Easter keke nekukurumidza uye inonaka - recipe | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Tsika dzemhemberero dzeIsita
Kutanga, tinofanirwa kunzwisisa zvimwe zvezvinhu zvezororo reIsita. Kutanga kwesvondo reIsita kunodaidzwa Vhiki dzvene... Pachivanhu, rino isvondo nemitemo yakaoma. Kuti Easter ibude nenzira kwayo, zvinokurudzirwa kuibika neMugovera. Isita ichave inozorodza neSvondo, uye kutanga kwevhiki reIsita kuitira kuunza runyararo mumba mumweya nemumoyo wemunhu.
Zvinongedzo zveIsita Keke
Iwe unofanirwa kugadzirira chikafu cheMugovera kubheka. Kune mhuri yevatatu, huwandu hwemakeke eIsita akawanikwa kubva kuhuwandu hwezvigadzirwa hunokwana.
Ngatigadzirirei zvigadzirwa zvekubheka:
Mazai gumi nemashanu;
200 gramu emazambiringa akaomeswa;
250 gramu yetiraira;
magirazi matatu eshuga;
zana giramu pakiti rembiriso;
Iyi ndiyo yakasarudzika sarudzo yezvikafu zvaunogona kuzadza nesinamoni, michero yakaomeswa, kana zvimwe zvakanaka. Iwe zvakare unoda hupfu hwehuga kana yakagadzirira-yakagadzirwa confectionery icing uye chingwa mafufu.
Kugadzirira keke mafomu
Vanogona kunge vari bepa, tini kana silicone. Silicone mune iyi kesi, hongu, inonyanya kugadzikana, asi inodhura kwazvo. Mapepa mafomu haana kunyatsonaka, kunze kwekunge waaisa mumataini mafomu kuitira chengetedzo. Girisa maumburu nebhotoro, uye wozodurura zvimedu zvechingwa pasi.
Kubaya mukanyiwa weKulich
Tinosanganisa mbiriso mumukaka unodziya pamwe nekuwedzera kwepuniki yeshuga. Rova mazai gumi nemazai mashanu muhombodo hombe. Iyo yolks kubva mazai mashanu ichaenda mukati mechando. Nekuchenjera zviparadzanise vachena kubva pamazai, zvikasadaro, kana kanenge kari giki rikasara mune vachena, kurova iyo glaze kunozova kunetsa zvakanyanya. Wedzera yakanyunguduka ruomba uye yakaviriswa mbiriso kune zai-shuga massa.
Ita shuwa kuti bhotela harisi kupisa, zvikasadaro mukanyiwa haukwire. Sanganisa hupfu hushoma uye vanillin muhukuru hwemvura. Iyo mukanyiwa inofanira kumira kunamatira kumativi eiyo chigadziko iyo mairi yakakanya.
Dhavhara bundu rakapedzwa netauro uye woisa munzvimbo inodziya. Iyo yakanakisa poda nharaunda: yakanyarara, isina-dhiza uye inodziya. Kazhinji tinomirira kuti mukanyiwa uuye kweinenge awa.
Isu tinowaridza mukanyiwa mumafomu eKulich
Iyo mukanyiwa, iyo yakauya ihuru, inogona kuiswa mumatini. Sungai mazambiringa akaomeswa kana michero yakakangwa, kana zvese pamwechete, kune chidimbu chega chega. Iyo mukanyiwa inofanirwa kutora chikamu chimwe muzvitatu cheforoma. Isu tinoisa mapundu ehupfu munzvimbo inodziya uye tinomirira kuti fomu rizadze zvizere.
Kubheka Easter keke - recipe
Chinhu choga chakasara kubheka mapai pane tembiricha yemadhigirii mazana maviri. Ramba uine ziso rakatarisana neIsita muchoto. Kana iyo tip yashanduka yakasviba brown, pasque inogona kubviswa. Hupenyu hwakanaka kubira: kana iwe uri kubheka Easter mumataini mafomu, usayedze kuaburitsa iwo nekukasira, mira maminetsi 200. Iyo pasochka inozove yakapfava uye nyore kubuda muforoma.
Kushongedza Kulich ne glaze
Inosara yekushongedza Isita. Whisk protein kwenguva yakareba neshuga yeupfu kana kukanya pamusoro nzira pabhokisi ine glaze... Zora pamusoro peIsita negirazi rakapedzwa uchishandisa bhurasho resilicone uye urisase neupfu hwakatsvuka-pamusoro pamusoro.
Bon appetit, munhu wese. Tinovimba zororo renyu reEaster harizoenzanisike.
Mibvunzo ye67 mu database yakagadzirwa mu 0,810 masekondi.